काठमाडौ दिउसै अँध्यारो, सनिबार पनि यस्तै रहने मौसमविद्को भनाई – Online Nepal Site
दीपक र सरितालाई पनि कोरोना पुष्टि
४१ वर्षको कलिलाे उमेरमै अस्ताए सन्त कुमार थापा मगर !
यो के भयो ? कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना
अस्पताल लगिदेऊ भन्दाभन्दै बि’रामीले ट्याक्टरमा गु’माए ज्यान
खुट्टा गुमाएर पनि माइल हिडेकी सुधाखुट्टा गुमाएर पनि माइल हिडेकी सुधा
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौ दिउसै अँध्यारो, सनिबार पनि यस्तै रहने मौसमविद्को भनाई
काठमाडौ दिउसै अँध्यारो, सनिबार पनि यस्तै रहने मौसमविद्को भनाई
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चट्याङसहित वर्षा भएको छ । लामो समय देखि वर्षा नभएका कारण प्रदुषण भोगी रहेका काठमाडौवासीलाई केही राहत भएको छ । दिउसोबाट हावाहुरी, चट्याङ र असिनाका कारण उपत्यकाको जनजीवन भने केही असहज बनेको छ ।
“काठमाडौंमा चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ,” मौसमविद् वरुण पौडेलले भने, “दुई तीनघण्टा समस्या छ । भोलि दिउँसो पनि यस्तै हुन सक्छ । प्रि मनसुन सिजनका कारण यस्तो समस्या आउँछ । हुरी बतास, चट्याङ भइरहेको छ ।” उनका अनुसार काठमाडौं, गोरखा, पोखरालगायतका क्षेत्रमा प्रि मनसुनको असर देखिएको छ ।
हाल प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरुको थोरै स्थानमा मेघगर्जन,चट्याङ, हावाहुरीसहित हल्का वर्षा भइरहेको वरिष्ठ मौसमविद् पौडेलले बताए ।
उनले भने,‘अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा ठूलो पानी त होइन हल्का पानी परिरहेको छ । तर चट्याङसहित कुनै ठाउँमा असिना परिरहेको छ । उनका अनुसार प्रिमनसुन सक्रिय भएकाले अहिले हावाहुरीसहित पानी परिरहेको हो । प्रि मनसुनको समयमा बिहान घाम लाग्ने दिउँसो भएपछि हावाहुरी चल्ने, चट्याङ पर्ने र पानी पर्दछ । र विहान रोकिन्छ । प्रिमनसुनको समयमा लगातार झरी पर्ने भने हुँदैन । जेठर असारदेखि मनसुन सक्रिय हुनुअघि प्रि(मनसुनको प्रकृया चल्ने मौसमविद्ले पौडेलले बताए । तस्बिर बाह्रखरी
जुन बाटो बनाउँदा घुस खाए, त्यही बाटोमा गाडी प’ल्टेर नेताले ज्या’न गु’माए !
इटाँ भट्टामा जिउँदै मजदुर राखेर पो’ल्ने नेता आलमलाई छुटाउन पहल गर्दैछु’- शेरबहादुर देउवा
Breaking: आज फेरी ह्वातै बढे कोरोना संक्रमित…सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघे
भारतको दाहिने गाला नराम्ररी चड्किसकेको छ : श्वेता खड्का